वीरगन्जको अवस्था भयावह – Satya Samachar
मुख्य पृष्ठ /समाचार/वीरगन्जको अवस्था भयावह
वीरगन्ज : वीरगन्जमा कोरोना संक्रमणका कारण पछिल्ला दुई दिनमा पाँच जनाको मृत्यु भएको छ । बिहीबार वीरगन्ज महानगरपालिका- १६ का ३५ वर्षीय युवक, वीरगन्जको जगदम्बा इन्टरप्राइजेजका सीईओ ५६ वर्षीय पुरुष र वीरगन्ज २ का ७० वर्षीय वृद्धको मृत्यु भएको हो । बुधबार पनि वीरगन्जमा दुई संक्रमितको उपचारका क्रममा मृत्यु भएको थियो । साउनमा मात्रै वीरगन्जमा ९ जना संक्रमितको मृत्यु भइसकेको छ । बिहीबार पर्साका ४१ जनामा संक्रमण भेटिएकोमा ३७ जना वीरगन्जकै हुन्। बुधबार पनि ८४ जनामा संक्रमण भेटिएको थियो ।
मास टेस्टिङमा संकलन गरिएका स्वाबमा २० प्रतिशतभन्दा बढीको पोजेटिभ रिपोर्ट आइरहेको नारायणी अस्पतालका प्रमुख मेडिकल सुपरिडेन्टेण्ड (मेसु ) डा. मदन उपाध्याय बताउँछन् । कोभिड अस्पतालमा संक्रमित राख्ने ठाउँ नहुँदा एक सय २६ जना संक्रमितलाई घरमै राखिएको छ।
५० बेड मात्रको कोभिड अस्पतालमा बेड खाली नहँुदा पछिल्लो पटक संक्रमण फेला परिरहेकालाई घरमै होम आइसोलेसनमा राख्नुपर्ने बाध्यता रहेको अस्पतालका कोर्डिनेटर डा. उदयनारायण सिंह बताउँछन् ।
वीरगन्ज महानगरपालिका नगर प्रमुख (मेयर) विजयकुमार सरावगीमा पनि कोभिड- १९ संक्रमण पुष्टि भएको छ । काठमाडौंको मेडिसिटी अस्पतालमा पीसीआर परीक्षणका लागि गत बुधबार स्वाब दिएका सरावगीमा बिहीबार संक्रमण पुष्टि भएको हो । संक्रमण पुुष्टि भएका मेयर सरावगी हाल काठमाडौं टंगालस्थित आफ्नै घरको आइसोलेसनमा छन् । सरावगीका प्रेस सल्लाहकार गोविन्द देवकोटाका अनुसार मेयर सरावगीको स्वास्थ्य अवस्था अहिले सामान्य छ ।
मेडासिटी अस्पतालले पठाएका एक हेल्थ असिस्टेन्टले मेयर सरावगीको घरमै उपचार गरिरहेका छन् । स्वास्थ्यमा समस्या भएपछि सरावगी गत सोमबार वीरगन्जबाट निजी सवारीमा काठमाडौं गएका थिए । त्यही दिन उनले मेडिसिटी अस्पतालमा पुगी उपचार गराएका थिए । बिहीबार संक्रमण पुष्टि भएपछि साँझ उनले फेसबुक पेजमा आफूलाई कोरोना संक्रमण भएको खुलाएर पोस्ट गरेका थिए ।
लक,डाउन उ,ल,ङ्घन गर्ने व्यवसा,यीहरुको घो,षणाः भोलिबाट बजार खु,ल्ने
फेरी घ’ट्यो सुनको मूल्य, हेर्नुहोस आजको बजार भाउ
भारतले अति क्रमण गरेको कालापानी–लिपुलेक क्षेत्रमा स शस्त्र प्र हरीको ह तियार सहित ग स्ती सुरु